Ilhan Cumar oo difaacday hadal ay ku weerartay Israel – Radio Damal
Ilhan Cumar oo difaacday hadal ay ku weerartay Israel
Ilhan Cumar oo ka tirsan xubnaha Koongareeska Mareykanka ayaa jawaab jawaab celisay canaan uga baqayaa asxaabteeda Dimuqraadiga hadaladeeda oo si wanaagsan u muujinaysa mid ka mid ah dowlada Mareykanka iyo Israel Hamas iyo Taliban.
Xildhibaano Yuhuud ah ayaa Ilhan Cumar ugu yeeray inay cadeyso ereyadeeda, laakiin wakiilka Minnesota ayaa si kulul uga jawaabtay eedeymaha loo jeediyay.
Tan ayaan markii ugu horeysay markii ugu horeysay ee dhaliilaha Ms Omar ay u jeediso Israel ay khilaaf ka dhex abuurto xubnaha xisbigeeda.
Maalintii Isniinta, Ms Omar waxay barteeda Twitterka ku soo qortay “waxaan aragnay gaboodfallo aan la qiyaasi karin oo aan ku faraxsanahay Mareykanka, Xamaas, Israel, Afghanistan, iyo Taliban”.
“Waa inaan sameynaa isla xisaabtan iyo cadaalad dhamaan dhibatooyinka ku kacsan ee dhanka wanaagsan u muuqda,” ayay qortay, oo ay kujirto fiidiyoow su’aalo weydiinaysa Xoghayaha Arimaha Dibada Anthony Blinken intii lagu guda jiray dhageysiga gudiga Aqalka Wakiilada.
Khilaafka ayaa imanaya ku saabsan un kadib markii uu cadaadaada bariga dhexe ay kudhamaatay xabad joojinta iyadoo ay isa soo tareyso wararka ku saabsan weerarada neceyb naceyb ee dhanka dhanka ah yuhuuda Mareykanka
Qoraal ay u kala sooceen kooxdan oo uu hogaaminayo Dimuquraadiga New York Jerry Nadler ayay ku qoreen “isku soo biirinta Mareykanka iyo Israel Xamaas iyo Taalibaan waa mid weerar ah”.
Subaxnimadii hore ee Khamiista, Ms Omar – oo asalkeedu yahay Soomaali qaxooti ah kana mid ah muslimiintii ugu horeysay ee loo furo albaabka Koongareeska – waxay u jawaabtay “wax laga xishoodo” sida caadiga ah hadalkoodu wuxuu ahaa mid ku saleysan Islaam Neceyb.